၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးဂျပန်ညှပ် ၁၀ ခု - ဂျပန်ကတ်ကြေး
၂၀၂၀ တွင်ထိပ်ဆုံးဂျပန်စာညှပ် ၁၀ ခု
ဇွန်အိုး ဇန်နဝါရီလ 02, 2020 ဖတ်ပြီးသားမိ 6
သူတို့သည်အကောင်းဆုံးသောဂျပန်ဖြတ်တောက်နိုင်သောဓါးသုံးသံမဏိများကိုတီထွင်။ ယခုကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည့် Conex Edge blade ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးသောပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဂျပန်စတိုင်၊ ဂျပန်သံမဏိ၊ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း FedEx ဦး စားပေး Express ကို ဂျပန်ကတ်ကြေးမှာ!
ရွေးချယ်မှုများသည်အမှတ်တံဆိပ်၏ဂုဏ်သတင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှင့်ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးတို့အပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်သည်။
# 1 ရွေးချယ်မှု
Yasaka offset ဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေး
100% ဂျပန်ခိုင်မာ Hitachi သံမဏိ
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန် Ergonomics ကို offset
အကောင်းဆုံး Entry Level
Kamisori ဓား Professional ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
ဂျပန် 440c ဂျပန်သံမဏိ
ထူးခြားသော 3D Ultra-Sharp ခုံး Edge Blade
အကောင်းဆုံး Value ကို
Juntetsu Offset ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး
Premium Japanese VG10 သံမဏိ
ခုံး Edge Blade ကို
Ichiro Offset ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာစေခြင်း
ဂျပန် 440C သံမဏိ
Sharp ကခုံး Edge & V-Shaped ပါးလွှာ
Mina Umi ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
Juntetsu VG10 ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
ဂျပန် VG10 သံမဏိ
အမှုန့်အရောင် finish ကို
Juntetsu နှင်းဆီရွှေ 440c သတ်မှတ်မည်
ပရီမီယံဘာဘာ Long Blade ကို
ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ ဖန်တီးထားသည် ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း / အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆု၊ အမြတ်ငွေ၊ အကြိုက်ထည့်သွင်းရန်အကြိမ်အရေအတွက်၊ နှင့်ပညာရှင်များထံမှခြုံငုံတုံ့ပြန်ချက်။
ဂျပန်သံမဏိသည်ဤကတ်ကြေးများကိုကြာရှည်ခံရန်၊ ပိုမိုပေါ့ပါး။ ချေးယူမှုနှင့်ကာယပျက်စီးမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက်ထိပ်တန်းဂျပန်စာညှပ် ၁၀ ခု
၁) Yasaka Offset ဆံပင်ညှပ်ညှပ်
ကိုင်တွယ်အနေအထား Offset လက်ကိုင်
သံမဏိ ATS314 ကိုဘော့သံမဏိ
SIZE5", 5.5" နှင့်6"
နောက်ဆုံးပေါ် Clam ပုံသဏ္Conာန်ခုံး Edge
Yasaka Seiki ကုမ္ပဏီလီမိတက်, ဂျပန်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂျပန်ကတ်ကြေးနှင့်အညှပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဂျပန်ပညာရှင်များကိုထုတ်လုပ်သည့်အတွက်နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသည် Yasaka အရည်အသွေးမြင့်နှင့်စင်ကြယ်သောဂျပန်သံမဏိမှညှပ်။ ၏ထူးခြားသောခိုင်မာသော Yasaka ကတ်ကြေးသည်ကြာရှည်ခံနိုင်သောကတ်ကြေးများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပွန်းပဲ့ခြင်း၊ ချေးခြင်းနှင့်ခြုံငုံ။ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။
အဆိုပါ Yasaka Offset သည်ညှပ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော Clam ပုံသဏ္conာန်အစွန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကိုဘော့ဂျပန်သံမဏိများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာမသန်မစွမ်းသောဖြတ်တောက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Yasaka သြစတြေးလျကတ်ကြေး
နာရီနှင့်ချီ။ ဖြတ်တောက်သောပညာရှင်များအတွက်ထူးခြားသော Ergonomics ဒီဇိုင်းသည်သင့်လက်ချောင်းနှင့်လက်ချောင်းကိုသဘာဝအဆင်ပြေသောအနေအထားဖြင့်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပေါ့ပါး။ ခိုင်မြဲသောဆုပ်ကိုင်မှုကသင်၏လက်ကောက်ဝတ်နှင့်တံတောင်ဆစ်ကိုဖိအားလျော့နည်းစေသည်။
ဆံပင်ညှပ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများကိုရှာဖွေသည်။ Yasaka ကတ်ကြေးများသြစတြေးလျသည်အဆင့်မြင့်ဂျပန်သံမဏိများမှပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးမြင့်эрဂုံနစ်ကတ်ကြေးတစ်မျိုးကိုပေးသည်။ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများစွာသည်အဘယ်ကြောင့်ကူးပြောင်းနေကြရသည်ကိုရှာဖွေပါ Yasaka!
ဒီသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်ပါသည်- သင်ရွေးချယ်ထားသောဖြတ်တောက်သောကတ်ကြေးနှင့်က Yasaka အိတ်
ကြည့်ရှုခြင်း Yasaka offset
2 ။ ) Kamisori ဓားဖြတ်တောက်ခြင်း
သံမဏိ ဂျပန် 440c ဂျပန်သံမဏိ
SIZE 6.0 "6.5", 7.0 "နှင့် 7.5" လက်မ
ဓါး Kamisori ဂျပန် 3D ခုံး
Finish တာရှည်ခံပွတ် finish ကို
အဆိုပါ SWORD မော်ဒယ်ပေါင်းစပ် Kamisoriလက်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်များနှင့်ပခုံးများပေါ်တွင်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုတို့ဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ဖိစီးမှုကင်းသောသက်တောင့်သက်သာရှိစေသည့်ခေါက်ထားသည့်ဓါးတစ်ချောင်းနှင့်ခန္ဓာဗေဒစနစ်။
·ဘာဘာ၏နံပါတ် ၁ ရွေးခြင်း
·သီးသန့် Kamisori တစ်သက်တာအာမခံ
·ဇိမ်ခံကား Kamisori အမှု
American Salon Pro ရွေးချယ်မှု (multi-year)
Beauty Launchpad Readers ရွေးချယ်မှု (နှစ်ပေါင်းများစွာ)
ဆံပင်ညှပ်သမားဂျာနယ် Stylists ရွေးချယ်မှု
Coiffure က de ပဲရစ်
ကြည့်ရှုခြင်း Kamisori ဓားကို
3. ) Juntetsu Offset ဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေး
သံမဏိ ဂျပန် VG10 သံမဏိ
SIZE 5.5 "နှင့် 6" လက်မ
နောက်ဆုံးပေါ် ခုံး Edge Blade ကို
Juntetsu သည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ပရီမီယံ VG10 သံမဏိမှဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်အလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ အဓိကဒီဇိုင်းများသည်လက်ဖြင့် လုပ်၍ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး semi-offset professional ergonomics ဖြစ်သည်။ Japan Scissors သည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ရှိ Juntetsu ကိုတရားဝင်ပြန်လည်ရောင်းချသည်။
Juntetsu ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်ကတ်သည်အကြမ်းခံ VG10 သံမဏိကို အသုံးပြု၍ အလွန်ချွန်သောသောခုံးဒဏ်ကိုခံနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားကြာကြာများအတွက်ပြတ်သားနေနှင့်ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်ပညာရှင်များအဘို့အမစိုက်အလွယ်တကူဖြတ်။
ဒီသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်သည် Juntetsu (၅.၅ လက်မ (သို့) ၆ လက်မ) သင့်ရွေးချယ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သားရေအိတ်တစ်ထည်သန့်ရှင်းသောအထည်နှင့်ကတ်ကြေးဆီ။
Juntetsu Offset ကိုကြည့်ပါ
4 ။ ) Fuji MoreZ DXF ကတ်ကြေး
Fuji MoreZ DXF ဆံပင်ကတ်ကြေးအရွယ်အစား ၅.၀ (၅ လက်မ)၊ ၅.၅ (၅.၅ လက်မ)၊ ၆၀ (၆ လက်မ) နှင့် ၆.၅ (၆.၅ လက်မ) ။ ဤအဂျပန်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေး Fuji ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ် အခြေခံ၍ အထူးရှုထောင့်များနှင့်ပုံစံများဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည်ကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်သည့်အချိန်၌ပင်လျော့နည်းစေသည်။ Fuji MoreZ ညှပ်
5 ။ ) Yasaka ရှည်လျားသောဓါးဘာဘာညှပ်
ကိုင်တွယ်အနေအထား Semi Offset
SIZE ၆ လက်မ
ဓါး Clam ပုံသဏ္Conာန်ခုံး Edge
အဆိုပါ Yasaka offset barber ဖြတ်တောက်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော Clam-shaped ခုံးအစွန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောကိုဘော့ဂျပန်သံမဏိများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာမသန်မစွမ်းသောဖြတ်တောက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် Yasaka သြစတြေးလျရှိဂျပန်ကတ်ကြေး။
ကြည့်ရှုခြင်း Yasaka ဆံပင်ညှပ်သမား
6 ။ ) Ichiro အနက်ရောင်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာစေခြင်း
ကိုင်တွယ်အနေအထား Semi-Offset လက်ကိုင်
သံမဏိ 440c ဂျပန်သံမဏိ
Ichiro နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ အရည်အသွေး 440C သံမဏိ၊ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အဆင်ပြေသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်ခမ်းနားသောခုံးဓါးများဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Ichiro ကတ်ကြေးများသည်ပုံမှန်၊ ကျောင်းသားများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Ichiro Matte Black ဖြတ်စက်ကို 440C သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပေါ့ပါးပြီးသင်ဆံပင်ကိုအဆုံးတွင်နာရီပေါင်းများစွာဖြတ်တောက်နေစဉ်ဖိအားကိုသက်သာစေပြီးပြီးပြည့်စုံသောချိန်ခွင်လျှာဖြစ်သည်။ အဆိုပါဓါးချောမွေ့လွယ်ကူသောဖြတ်တောက်မှုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အနားရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Ichiro Matte Black ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတွင်လွယ်ကူသောဖြတ်တောက်နိုင်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သော v-shaped သွားများဖြစ်သည်။ ဤပါးလွှာသောကတ်ကြေး ပုံမှန်ပါးလွှာမှုနှုန်းမှာ ၂၀% မှ ၂၅%၊ စိုစွတ်သောဆံပင်၏ပါးလွှာမှုနှုန်းသည် ၂၅% မှ ၃၀% တွင်ရှိသည်။ ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန်အတွက်သူတို့ကအံသွားများကိုအသုံးပြုသည်။
ဒီသတ်မှတ်ချက် ပါဝင်သည် A Ichiro Matte Black ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးတပ်ဆင်ခြင်း၊ သားရေအိတ်၊ သင်တုန်း၊ သန့်ရှင်းသောအထည်နှင့်ကတ်ကြေးဆေး။
ကြည့်ရှုခြင်း Ichiro Black က
7 ။ ) Mina Umi ကတ်ကြေးဖြတ်တောက်
ကိုင်တွယ်အနေအထား အော့ဖ်လိုင်း Ergonomics
SIZE ၂၆ လက်မ
နောက်ဆုံးပေါ် ခုံး Edge
WEIGHT အပိုင်းအစ 42 ဂရမ်
Mina အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ Mina စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ကတ်ကြေးသည် Stainless Steel နှင့် Professional Ergonomics ကိုအသုံးပြုသည်။
အဆိုပါ Mina Umi လက်ယာဆံပင်ညှပ်ဖြတ်စက်များကိုလက်ဖြင့်အတု လုပ်၍ အဆင်ပြေချောမွေ့သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ဖြတ်တောက်နေစဉ်အဆင်ပြေသောသဘာဝအနေအထားကိုသေချာစေသော Offset Handle Ergonomics ။
အဆိုပါ Mina Umi ကျောင်းသားများ၊ ပေါ့ဆသောဆံပင်အလှပြုပြင်သူများသို့မဟုတ်ပညာရှင်များအတွက်ချွန်ထက်သောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောချွန်ထက်သောအစွန်းရှိသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ကြည့်ရှုခြင်း Mina Umi
ဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးခြားနားချက် | ဤနေရာတွင် ScissorHub.com.au တွင်ဖတ်ပါ
ဂျပန်ကတ်ကြေး၏သမိုင်း ဤနေရာတွင် Scissors.JP တွင်ဖတ်ပါ
ဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေး (၁၀) ခု ဤနေရာတွင် JPscissors.com မှာဖတ်ပါ
ကနေဒါကဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးကိုလမ်းညွှန်တယ် ဤနေရာတွင် JapanScissorShop.com တွင်ဖတ်ပါ
အကောင်းဆုံးဂျပန်အလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေးလမ်းညွှန် | ဤနေရာတွင် SalonScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
အကောင်းဆုံးဂျပန်ဆံပင်ညှပ် ဤနေရာတွင် BarberScissors.com.au တွင်ဖတ်ပါ
သမိုင်းနှင့်ပြတိုက်၏ဂျပန်ကတ်ကြေးလမ်းညွှန် | MAAS.Museum တွင်ဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ
American Express Apple Pay ကို Google က Pay ကို JCB Mastercard PayPal က ငွေပေးချေပါ ဗီဇာ